२१ श्रावण २०७४
केशव पाण्डे चितवन - चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेस(माओवादी गठबन्धनकी मेयर उम्मेदवार रेणु दाहाल विजयी भएकी छिन्। वैशाख ३१ गते सम्पन्न पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणनाका क्रममा जेठ १४ गते मतपत्र च्यातिएपछि शुक्रबार वडा नम्बर १९ मा पुनः भएको मतदान भएको थियो । १९ र २० वडाको मतगणना बाँकी हुँदा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली सात सय ८४ मतले अगाडि थिए। १९ र २० वडाको मतगणनाका…विस्तृत समाचार »
काठमाण्डौ -चितवनको भरतपुर महानगर पालिका १९ मा सर्वोच्च अदालतले फेरी निर्वाचन गर्न आदेश दिएको छ । आईतबार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको ईजलासले पुन निर्वाचन गर्न आदेश दिएको हो । भरतपुरमा मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी प्रतिनिधिहरुले मतपत्र च्यातेपछि विवाद सुरु भएको थियो। विवादपछि मतगणना स्थगित भयो। निर्वाचन आयोगले १९ नम्बर वडामा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको त्यही निर्णयविरुद्ध पुनः मतदान होइन पुन मतगणनाको…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं -दोस्रो चरणको चुनावअघि हुनै लागेको संविधान संशोधनका क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १० सांसद हराएका थिए । कतिपयले एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ति सांसदलाई फकाएर गायब बनाएको आरोप लगाए । यतिसम्मकी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापासम्मले यस्तो आरोप लगाए । तर, त्यो पुष्टि हुन सकेन । अहिले फेरि संविधान संशोधनको विषयमा चर्चा चल्न थालेपछि राप्रपामा ध्रुविकरण र विभाजनको अवस्था आएको छ ।…विस्तृत समाचार »
कांग्रेसका कुन नेताले कहाँबाट मतदान गर्दैछन् ?
काठमाडौं - स्थानीय तहको दोश्रो चरणको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यहरू यतिवेला गृह जिल्लामा चुनाव प्रचारमा छन् । काठमाडौं बस्दै आएका कांग्रेसका ३५ भन्दा बढी नेता आफ्नै स्थायी वसोवास भएको शहर, बजार, गाउँ र टोलमा भोट माग्नमा व्यस्त छन । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान गर्न गृह जिल्ला डडेल्धुरा पुगेका छन् । सात नम्बर…विस्तृत समाचार »
काठमाडौं - असार १४ गते हुने दोश्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब एक दिन मात्र बाँकी छ । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तामात्र होइन, सर्वसाधारण समेत मतदान गर्न आफ्नो गाउँ नगर पुगिरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता पम्फा भुसाल, हेडक्वार्टर सदस्यहरू अग्निप्रसाद सापकोटा, देव गुरुङ, गिरीराजमणी पोख्रेल लगायतका नेताले बैशाख ३१ गतेको पहिलो चरणको निर्वाचनमा…विस्तृत समाचार »
राजपाका नेता कोही बहिस्कार त कोही सक्रिय सहभागि, विभाजको संकेत
काठमाडौं - संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का नेताहरू कोही बिरोध, बहिस्कार र भण्डाफोरमा त कोही चुनावको सक्रिय सहभागिता जुटेका छन् । असार १४ गते प्रदेश नम्बर १, ५ र ७ मा हने स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको राजपाका केही नेता गाउँपालिका र नगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा भोट माग्न व्यस्त छन् । केही…विस्तृत समाचार »
महरा मन्त्री हुदा समेत नेपाल चीन संयन्त्रको वैठक किन अघि बढेन् ?
चन्द्रशेखर अधिकारी, काठमाण्डौ- नेपाल र चीनबीच पटक–पटक प्रस्तावित परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा नै आपसी विश्वास बढ्न नसक्दा यो र अन्य संयन्त्रका बैठकसमेत समयमा हुन सकेका छैनन् । नेपालले लगातार आग्रह गरे पनि चीनले बैठक अस्वीकार गरेकै कारण यसअघि सर्दै आएको जानकारी अर्थ र परराष्ट्रका अधिकारीले दिए । गत वर्ष भदौमा तय भएको बैठक नभएपछि नेपालले गत माघमा पहल गरे पनि…विस्तृत समाचार »